Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण भदौ १ पछि कुन एयरलाइन्सका कति उडान, भाडादर कति छ ? (सूचीसहित)
भदौ १ पछि कुन एयरलाइन्सका कति उडान, भाडादर कति छ ? (सूचीसहित)
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:१३
काठमाडौँ, ९ साउन । कोभिड–१९ सङ्क्रम नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीपछि झण्डै पाँच महिना मुलुकको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान प्रायः ठप्प हुने भयो । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको बन्दाबन्दी यही साउन ६ गते अर्थात् १२० दिनपछि बन्दाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्यो ।
उक्त अवधिसम्म मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुवै उडान सेवामा व्यावसायिक बाहेकका चार्टर्ड र कार्गो उडान भए । सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले बुकिङ खुलाएर उडानको धमाधम तयारी गरिरहेका छन् ।
कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम कायमै भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमामा अहिलेलाई एकतिहाइ क्षमतामा मात्रै उडान हुनेछ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीकाअनुसार दैनिक औसत १५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय र बढीमा ५० आन्तरिक उडान हुने गरी सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको छ । प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालकको छलफलले कुन गन्तव्यमा कति उडान गर्नेबारे निर्णय हुनेछ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले आन्तरिक उडानको तालिका मोटामोटी टुङ्गिए पनि विदेशी एयरलाइन्सको कति सङ्ख्यामा उडान हुने भन्ने निर्णय भइनसेकेको बताए । उनका अनुसार वायुसेवा सञ्चालक र प्राधिकरणबीच बिहीबार भएको सहमतिमा बुद्धएयरलाई १७, यती एयरलाइन्सलाई ११ र श्री एयरलाइन्सलाई आठ उडान गर्न अनुमति दिइएको छ ।
सौर्य, सीता, सिम्रिक र समिट एयरको कति उडान भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । विमानस्थलमा एक घण्टामा ३५० यात्रुलाई मात्र उडान गर्ने सहमति भएको छ । थोरै जहाज भएका र दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्दै आएका एयरलाइन्सले कति उडान गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति भइसकेको छैन ।
दैनिक १०० हाराहारी उडान गर्ने बुद्धएयर र दैतिक औसत ७० उडान गर्ने यति एयरलाइन्सले आफ्नो क्षमताअनुरुप उडान सङ्ख्या कम भएको गुनासो गरेको छ । श्री एयरलाइन्सले भने अहिलेको अवस्थामा निर्धारित उडान सङ्ख्यालाई सामान्य ठानेको छ ।
बुद्धएयरले आफ्नो जहाज सङ्ख्याअनुरुप उडान सङ्ख्या कम भएको र अहिलेको अवस्थामा धनगढी र सुर्खेत गन्तव्यमा उडान गर्न नसकिने जनाएको छ । बुद्धएयरले सामान्य अवस्थामा दैनिक छ हजारसम्म यात्रु व्यवस्थापन गरेको थियो । कम्पनीले ११ एटिआरसहित १३ जहाजमार्फत आन्तरिक उडान गरिरहेको छ ।
यतिले हाल पाँच एटिआर र पाँच जेटस्ट्रिमसहित १० जहाजमार्फत उडान भर्दै आएको छ । कम्पनीले सामान्य अवस्थामा दैनिक ७० उडान गथ्र्यो । श्री एयरलाइन्सका संस्थागत प्रबन्धक अनिल मानन्धरले सङ्क्रमणसँग जुधेर सुरक्षित र व्यवस्थित उडान गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको उडान सङ्ख्या काफी भएको बताउनुभयो । श्रीएयरले सामान्य अवस्थामा दैनिक २० वटासम्म उडान गर्ने गरेको थियो ।
विमानस्थलमा आन्तरिकतर्फ दैनिक ३०० भन्दा बढी उडान हुने गरेको थियो । आन्तरिक उडानमा ३४ हेलिकोप्टर तथा ४६ जहाजले उडान भर्छन् । आन्तरिकतर्फ १० हेलिकोप्टरसहित १९ वायुसेवा कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । रासस
काठमाडौँ, ५ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभएको बताएका छन् । आज आफ्नै निवास